Kpido: ọchụchọ ọchụchọ | Martech Zone
Tag: ọchụchọ ogo
Etu esi eme ka ichota ichota Site na ichota, nlekota oru, na ideghari njehie 404 na WordPress
Wednesday, February 24, 2021 Tuesday, August 24, 2021 Douglas Karr
Anyị na-enyere onye ahịa azụmaahịa aka ugbu a na itinye saịtị WordPress ọhụrụ. Ha bu otutu ahia, otutu asusu di iche-iche ma nwekwaa ihe ojoo obula gbasara ichota n'ime aho. Mgbe anyị na-eme atụmatụ saịtị ọhụrụ ha, anyị chọpụtara okwu ole na ole: Archives - ha nwere ọtụtụ saịtị n'ime afọ iri gara aga nwere ọdịiche pụtara ìhè na nhazi URL saịtị ha. Mgbe anyị nwalere njikọ peeji nke ochie, ha bụ 404'd na saịtị ha kachasị ọhụrụ.
Biko anyị nwere ike ịkwụsị arụmụka a? Odi m ka enwere ndi okachamara ndi ozo no na-adighi nma ikwu okwu banyere ndi mmadu n’enweghi nghota. Social bụ usoro nkwalite nke na-ewulite njikọta abụọ yana ịnye gị ohere ịbịakwute ndị na-ege ntị. Achọghị m ka m kpokọta ha niile, mana ọ dị ka ọtụtụ mkpọtụ na-abịa site na ndị ọkachamara SEO - ndị na-achọghị